Home Wararka Fahad iyo Kheyre oo caawa kulan dheer kula jira Gudoomiye Mursal
Fahad iyo Kheyre oo caawa kulan dheer kula jira Gudoomiye Mursal
Waxaa hadda kulan albaabada u xiran yahay ka socda guriga Gudomoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal. Kulanka ayaa waxa uu dhex marayaa Gudoomiye Mursal iyo RW Kheyre iyo Fahad Yasin oo wada socda. Kulanka hadda socda ayaa waxa uu ka danbeeyay kulamo ay Kheyre iyo Fahad horay ula qaateen MW Farmaajo.
Sida MOL loo xaqiijiyay MW Farmaajo ayaa ku gacan seyray qorsho ay labadaas nin wateen oo ahaa in dagaal lagu qaado Gudoomiye Mursal oo ay lacag ku bixiyaan in Mooshin Cusub laga keeno.
Kheyre ayaa balan qaaday in uu soo qancin doono Gudoomiye Mursal taasoo macnaheedu yahay in uu lacag ku iibsan doono Gudoomiyaha si uu u taageero qorshaha lagu kala diraayo Gudiga Maaliyida iyo isla xisaabtanka ee Baarlamaanka.
Wixii ka soo baxa kulanka caawa gadaal ayaan idinkaga soo gudbin doonaa.
Previous articleQarax ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay [SAWIRO]
Next articleShort of Time, Somalia Delays Landmark Regional Vote as Tensions Rise
Beesha caalamka oo caawa si dadban u taageertay doorashada berito ee...
MW Muuse Biixi oo qadka taleefonka kala hadlay MW Mustafa...